Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » Ukubikezela Okusha Kokhetho Lwe-UNWTO Kukhishwe yi-WTN
Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Abantu • Spain Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • ezithrendayo Manje • Wtn
Inhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba
Izithunywa ezivela emazweni ayi-113 kulindeleke ukuthi zivote eMhlanganweni Omkhulu we-UNWTO oseMadrid kusukela ngoNovemba 30-Disemba 3. eTurboNews manje inesibikezelo esikhishwe yiWorld Tourism Network. Ukubalwa kokuthi mangaki amazwe azovotela nokuthi mangaki ngokumelene nokuqinisekiswa kabusha kukaNobhala Jikelele kuxoxwa ngakho kulesi sihloko.
I-World Tourism Organisation (UNWTO) General Assembly ilungiselela ukwethula eMadrid kusukela ngoNovemba 30 - Disemba 3.
Into ye-ajenda elindelwe kakhulu ivoti eliyimfihlo lokulalelwa kokuqinisekiswa kuka-Zurab Pololikashvili kwelinye ithemu.
Bobabili oNobhala Jikelele bangaphambilini be-UNWTO kanye nenqwaba yabaholi bamanje nabangaphambili beWorld Tourism banxusa izithunywa ukuthi zivote. CHA ekulalelweni kokuqinisekiswa okuyimfihlo.
Lokhu kucaciswe ochungechungeni lwezincwadi ezivulelekile yizikhulu eziphezulu ze-UNWTO, i-Decency in the Election campaign by the Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba, kanye neCosta Rica ecela a ivoti eliyimfihlo kulokhu kulalelwa kokuqinisekisa.
Lesi sinqumo manje sisezandleni zezithunywa ezizohambela umhlangano weGeneral Assembly ngesonto elizayo.
Ngokwesibikezelo esisanda kukhishwa seWorld Tourism Network, umbono wokuqinisekisa kabusha okhethweni lukaNobhala Jikelele umi kanje kusukela zingama-23 kuLwezi.
Amazwe ayi-7 kulindeleke ukuthi aqinisekise iZurab okhethweni oluyimfihlo
Amazwe angu-43 okulindeleke ukuthi ANGEKE aqinisekise iZurab okhethweni oluyimfihlo
Amazwe angama-63 namanje awakaziwa ukuthi azovota kanjani okhethweni oluyimfihlo
2/3 wamavoti ayadingeka ukuze kuqinisekiswe.
Uma kwenzeka kungabikho ukuqinisekiswa, kuzovela ukhetho olusha olunamakhandidethi amasha. Inqubo eqondile yachazwa ngu eTurboNews kule ndatshana:
Izithunywa ezibhalisiwe njengamanje kuMhlangano Omkhulu we-UNWTO ozayo
Uma uyilungu leWorld Tourism Network, chofoza lapha ukuze uthole a uhlu lwezithunywa ze-UNWTO eMhlanganweni-Jikelele ozayo eMadrid 2021;